Ihe niile gbasara ego crypto: Bitcoin, Ether, Litecoin, .. ICO, ịzụ ahịa
Ihe niile gbasara ego crypto: Bitcoin, Ether, Litecoin,…
Bitcoin, Ether, Litecoin, Monero, Faircoin… ha abụrụla akụkụ dị mkpa nke akụkọ ihe mere eme akụ na ụba ụwa. Blockchain, obere akpa, ihe akaebe nke ọrụ, ihe akaebe nke stake, akaebe nke imekọ ihe ọnụ, nkwekọrịta smart, swaps atọm, netwọk ọkụ, mgbanwe mgbanwe,… okwu ọhụrụ maka teknụzụ ọhụrụ nke, ọ bụrụ na anyị eleghara ya anya, ga-eme ka anyị bụrụ akụkụ nke ụdị ọhụrụ. nke agụghị akwụkwọ 4.0.
N'ime oghere a anyị na-enyocha nke ọma eziokwu nke cryptocurrencies, Anyị na-ekwu okwu na akụkọ kacha pụta ìhè na-egosi na-enweta asụsụ niile nzuzo nke ụwa nke decentralized ego, block yinye technology na ihe niile fọrọ nke nta na-akparaghị ókè ohere.
1 Gịnị bụ Blockchain?
2 Kedu ihe bụ cryptocurrency?
3 isi ego crypto
4 Akpa ma ọ bụ akpa ego
5 Gịnị bụ Ngwuputa?
6 ICO, ụzọ ọhụrụ nke ọrụ ego
Gịnị bụ Blockchain?
Blockchain ma ọ bụ yinye blocks bụ otu n'ime teknụzụ kacha akpaghasị nke narị afọ nke 21. Echiche a dị ka ọ dị mfe: ọdụ data ndị yiri ya na-ekesa na netwọk enweghị isi. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ bụ ihe ndabere nke usoro akụ na ụba ọhụrụ, ụzọ isi kwenye na enweghị ike ịnweta ozi, iji mee ka ụfọdụ data nweta ya n'ụzọ dị nchebe, iji mee ka data ahụ bụrụ nke a na-apụghị ibibi ebibi na ọbụna nwee ike ịmepụta nkwekọrịta smart nke onye ọ bụla. A na-emezu okwu n'enweghị njehie mmadụ. N'ezie, nakwa onye kwuo uche ego site n'ikwe ka ịmepụta cryptocurrencies.
Kedu ihe bụ cryptocurrency?
Ego cryptocurrency bụ ego eletrọnịkị nke a na-egosipụta nke ọma na mbipụta ya, ọrụ ya, azụmahịa na nchekwa ya site na ihe akaebe cryptographic. Cryptocurrencies dabere na teknụzụ Blockchain na-anọchi anya ụdị ego enweghị isi nke na-enweghị onye na-eji ikike na ya mee ihe dị ka ego anyị maara ruo ugbu a nwere ọtụtụ uru. Cryptocurrencies nwere ike nweta uru ntụkwasị obi nke ndị ọrụ na-enye ha, dabere na ọkọnọ na ọchịchọ, ojiji yana ụkpụrụ agbakwunyere nke obodo na-eji ha na-ewulite gburugburu ebe obibi gburugburu ha. Cryptocurrencies nọ ebe a ka ọ nọrọ wee bụrụ akụkụ nke ndụ anyị.
isi ego crypto
Bitcoin bụ cryptocurrency mbụ sitere na Blockchain nke ya na-emepụta, ya mere, bụ nke a kacha mara amara. E chepụtara ya dị ka ụzọ ịkwụ ụgwọ na nnyefe nke uru dị mfe iji, ngwa ngwa, nchekwa na ọnụ ala. Ebe ọ bụ na koodu ya bụ isi mmalite mepere emepe, enwere ike iji ya gbanwee ya iji mepụta ọtụtụ cryptocurrencies ndị ọzọ nwere njirimara ndị ọzọ yana, mgbe mgbe, na-enwe echiche na ebumnobi ndị ọzọ na-atọ ụtọ ma ọ bụ dị obere. Litecoin, Monero, Peercoin, Namecoin, Ripple, Bitcoin Cash, Dash, Zcash, Digibyte, Bytecoin, Ethereum… bụ ụfọdụ n'ime ha mana enwere puku kwuru puku. Ụfọdụ jikọtara ya na ọtụtụ nnukwu nnukwu ọrụ metụtara teknụzụ na-agbanwe ụzọ anyị si ahazi ozi, data na ọbụna mmekọrịta ọha na eze. Enwere ọbụna ndị gọọmentị nyere, dị ka ebubo ebubo ngwọta maka nsogbu akụ na ụba ha, dị ka Petro nke gọọmentị Venezuela nyere ma kwado ya na mmanụ, ọla edo na diamond. Ndị ọzọ bụ ego mmegharị nkwado nke ọdịdị onye na-emegide ndị isi obodo ma na-ewulite gburugburu ebe obibi akụ na ụba mgbanwe n'ihe ha na-akpọ oge ndị isi obodo, dị ka Faircoin. Mana enwere ihe karịrị echiche akụ na ụba gburugburu cryptocurrencies: netwọk mmekọrịta na-akwụghachi onyinye kacha mma site na iji cryptocurrency nke ha, netwọkụ nke nnabata faịlụ decentralized, ahịa akụ dijitalụ… ohere na-agaghị agwụ agwụ.
Akpa ma ọ bụ akpa ego
Iji malite imekọrịta ihe na ụwa nke cryptocurrencies, ị chọrọ naanị obere ngwa ngwa, ngwa a na-eji nata na zipu nke a ma ọ bụ cryptocurrency ahụ. Akpa, obere akpa ma ọ bụ obere akpa eletrọnịkị na-agụ ndekọ nke Blockchain ma chọpụta ihe ndenye Akaụntụ metụtara igodo nzuzo na-achọpụta ha. Ya bụ, ngwa ndị a "mara" ego ole bụ nke gị. Ha na-adịkarị mfe iji ma ozugbo aghọtara akụkụ kachasị mkpa nke ọrụ na nchekwa ha, ha na-aghọ ezigbo ụlọ akụ maka ndị na-eji ha. Ịmara otú obere akpa eletrọnịkị si arụ ọrụ dị mkpa iji chee ihu n'ọdịnihu nke dịlarị ebe a.
Gịnị bụ Ngwuputa?
Ngwuputa ihe bụ ụzọ e si enweta ego crypto. Ọ bụ echiche ọhụrụ mana nke nwere otu ihe yiri Ngwuputa ọdịnala. N'ihe banyere Bitcoin, ọ bụ maka iji ike kọmputa dozie nsogbu mgbakọ na mwepụ nke koodu ahụ wetara. Ọ dị ka ịnwa ịchọta okwuntughe site n'ịgbalị ijichikota mkpụrụedemede na ọnụọgụgụ. Mgbe, mgbe ịrụsi ọrụ ike, ị ga-ahụ ya. a na-emepụta ngọngọ na mkpụrụ ego ọhụrụ. Ọ bụ ezie na ọ dịghị mkpa ịmara ihe ọ bụla gbasara Ngwuputa iji jiri cryptocurrencies, ọ bụ echiche ị kwesịrị ịmara onwe gị ka ị nwee ezi omenala crypto.
ICO, ụzọ ọhụrụ nke ọrụ ego
ICO na-anọchi anya onyinye mbụ mkpụrụ ego. Ọ bụ ụzọ ọrụ ọhụrụ na Blockchain ụwa nwere ike isi nweta ego. Ịmepụta tokens ma ọ bụ ego dijitalụ nke a na-etinye maka ọrịre iji nweta ego ego na ịmepụta ọtụtụ ọrụ ma ọ bụ obere mgbagwoju anya bụ kpam kpam. Tupu mmalite nke teknụzụ Blockchain, ụlọ ọrụ nwere ike ịkwado onwe ha site n'inye òkè. Ugbu a ihe fọrọ nke nta ka onye ọ bụla nwere ike ịnye cryptocurrency nke ha na-atụ anya na ndị mmadụ ga-ahụ ohere dị mma maka ọrụ ahụ ha chọrọ ịzụlite wee kpebie itinye ego na ya site n'ịzụta ụfọdụ. Ọ bụ ụdị nke igwe mmadụ, nhazi ọchịchị onye kwuo uche nke akụ ego. Ugbu a, ọ bụ n'ime onye ọ bụla ga-eru ka akụkụ nke ọrụ na-adọrọ mmasị ọ bụ ezie na, kwa, n'ihi enweghị ụkpụrụ, ICO nwere ike ịmalite nke ọrụ ya bụ aghụghọ zuru oke. Ma nke ahụ abụghị ihe mgbochi iji tụgharịa anya gị n'akụkụ nke ọzọ; ohere nke inweta ezigbo nloghachi ọbụna site na obere ntinye ego dị n'ebe ahụ. Ọ bụ naanị ịmụtakwu banyere nke ọ bụla n'ime echiche ndị a. Na ebe a, anyị ga-agwa gị ndị kasị akpali mbụ.
Warningdọ aka na ntị iwu